Mpanao politika nampiady vahoaka : Mahay mihavana hatrany -
AccueilRaharaham-pirenenaMpanao politika nampiady vahoaka : Mahay mihavana hatrany
Toe-javatra tena nisongadina tamin’iny fanamarihana ny fetim-pirenena frantsay tamin’ny 14 jolay 2017 tetsy Ivandry iny ny fihetsik’ireo mpanao politika avy nampiady vahoaka teto amintsika, mahay mihavana tsara. Saika voasolo tena tamin’iny avokoa moa ireo antoko politika eto amintsika na io ireo manohana ny fitondram-panjakana na io ireo manohitra ny fitondram-panjakana, fa ny tena nisongadina dia ny solontenan’ireo antoko lehibe efa nampiady sy nampifanandrina ny vahoaka Malagasy.
Mahay mihavana hatrany ny mpanao politika rehefa te-hihavana. Tamin’io fotoana io, dia nomarihin’izy ireo tamin’ny fifandom-bera mihitsy izany.
Ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc aza moa dia nifandray tanana taminy avokoa ireo mpanao politika sy tomponandraiki-panjakana taloha nanenjika azy. Nahay nihavana tsara koa ny mpomba an-dRavalomanana sy Rajoelina izay nanana solontena tao amin’io fanamarihana ny fetim-pirenena Frantsay io.
Ny vahoaka Malagasy anefa no nataon’izy ireo sorona tamin’ny fotoan’andro ary tena nifampiandany sy tsy nifampiditra an-trano mihitsy. Tao ireo nisara-bazana tanteraka vokatr’izany. Nisy mihitsy ny nisara-bady satria nampiadian’ny fironana politika. Tsy mbola fay anefa ny olona sasany fa mbola mitady hampiadian’ireo mpanao politika ireo indray ankehitriny, ka tadiaviny hoentina eny an-dalambe. Samy mpiara-monina ihany mantsy na ny mpanao fihetsiketsehana nahetsik’ i Marc Ravalomanana, na ireo tompona tsena etsy Analakely sorena tamin’ny fanakatonana ny tsenany noho ilay fihetsiketsehana.
Tranga efa niseho teto izany fampiadiana ny samy Malagasy izany ka tsy tokony hanaiky hataon’ny mpanao politika fitaovana hakany fahefana intsony ny vahoaka. Ny vahoaka tsotra no lasa lasibatra ary tsy voajery akory na dia namoy havana tamin’ny tolona ho azy ireo aza. Ry zareo mpanao politika anefa avy eo mahay mihavana tsara sy mifandom-bera.
Raha toa ka efa mazava ny hazakazaka ny amin’ny ho filatsahan-ko fidian’ireo kandida sasany amin’ny fifidianana filoham-pirenena, tahaka ireo mpanao politika izay efa nitondra teo aloha ary tsy mitsahatra mitety faritra. Dia mbola tsy nilaza ...Tohiny